१५ वर्षे ‘विकास लक्ष्य’ निर्धारण
तिलोत्तमा नपाको एकीकृत शहरी विकास योजना सार्वजनिक
रूपन्देही । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी १५ वर्षको विकास लक्ष्य निर्धारण गरी एकीकृत शहरी विकास योजना सार्वजनिक गरेको छ । सिद्धार्थ इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रा.लि.ले तर्जुमा गरेको उक्त योजना प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सोमवार संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
योजना सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले प्रदेशका १०९ ओटै पालिकालाई योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको बताए । उनले भने, ‘योजना तयार पारेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले अरूलाई उछिनेको छ ।’ पर्यटनमन्त्री गिरीले योजनाले सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेकाले सडक निर्माणमा कसैले संकीर्ण सोच राख्न नहुने बताए । उनले सो कार्यमा सवै नगरवासीको साथ अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले योजनाबद्ध विकासले मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको एकीकृत शहरी विकास योजना नगर विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
योजनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि योजना, लक्ष्य, रणनीति, आवश्यक बजेट र कार्यान्वयनको ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै आगामी पाँच वर्षमा नगरको आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत र १५ वर्षमा साढे १० प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अहिले तिलोत्तमा नगरको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशत छ । त्यस्तै हाल एक हजार ४७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा पाँच वर्षमा एक हजार ५९५ र १५ वर्षमा १० हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र १५ वर्षमा शून्यमा झार्ने रणनीति पनि तय गरिएको छ । त्यस्तै ९० प्रतिशत रहेको साक्षरतालाई पाँच वर्षमा ९५ र १५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल ३ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको उच्च शिक्षामा पहुँचको अवस्था आगामी पाँच वर्षमा ६ दशमलव १ प्रतिशत र १५ वर्षमा १२ प्रतिशत पुर्‍याइने उल्लेख छ ।
शहरी विकास योजनाले सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी १५ वर्षका लागि सडक निर्माणतर्फ रू. १६ अर्ब एक करोड ६० लाख खर्च हुने योजनाले अनुमान गरेको छ । यसबाट ९९ किलोमीटर सडक थपिनेछ । त्यस्तै तिलोत्तमा रिङरोड, मेगासिटी, तिनाउ कोरिडोर र रोहिणी कोरिडोरसहितको रिङरोड निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।
योजनाअनुसार प्रादेशिक बसपार्क, औद्योगिक ग्राम, राष्ट्रिय रंगशाला, फोहर व्यवस्थापन केन्द्र, अटो भिलेजजस्ता विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । तिलोत्तमा नगरले परिकल्पना गरेको ‘ग्रीन तिलोत्तमा, क्लिन तिलोत्तमा’को नारालाई सार्थक बनाउने गरी नै योजना तर्जुमा गरिएको कन्सल्टेन्सीले बताएको छ । योजनाले कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल १२ प्रतिशत रहेको वनक्षेत्र पाँच वर्षमा १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने रणनीति पनि योजनाले लिएको छ ।
रोल्पामा भारतबाट आउनेहरूसँगै जोखिम पनि बढ्यो[२०७७ जेठ, १९]
किसानलाई बीउबिजनको समस्या[२०७७ जेठ, १८]